सञ्चार/ प्रविधि – Page4– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
नयाँ दिल्ली – भारतले सन् २०३० सम्ममा पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोगले वातारण प्रदुषणको दर बढ्दै गएकाले सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको उर्जा मन्त्री पीयुष गोयलले बताए। हाल भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी तेल आयातकर्ता मुलुकहरुमध्येको तेस्रोे स्थानमा पर्छ । तेलको आयातलाई..
अहिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्तिले चुनावको प्रचारप्रसार गर्न थालेका छन् । कुनै राजनीतिक दलको समर्थक वा कार्यकर्ताले अर्को पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गालीगलौज गर्दै आफ्नो दलको गुणगान गाउन थालेका पोष्टहरू समेत देख्न सकिन्छ । वास्तवमा अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका..
फेसबुकका माध्यमबाट कसैको अश्लील तस्बिर उसको अनुमति बिना पोस्ट गर्न रोक्नका लागि फेसबुकले तयारी गरेको छ । यस प्रकारको पोस्तलाई रिभेन्स पोस्ट भनिन्छ । फेसबुक यसप्रकारका तस्बिर दोस्रो पटक पोस्ट गर्नका लागि पूर्ण रुपमा रोक लगाउने तयारीमा रहेको छ । यो रोक फेसबुक, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राममा लागु हुने भएपनि ह्वाट्सएपमा भने तत्कालै हुने छैन..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सीडीएमए (कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस) प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । टेलिकमले सीडीएएम प्रविधिमा आधारित ‘फिक्स्ड’ लाइन, मोबाइल र इन्टरनेट कुनै पनि सेवा विस्तारमा थप लगानी नगर्ने भएको हो । यो प्रविधिमा थप लगानी नगरिए पनि पहिलेदेखि नै चलिरहेका सेवालाई भने कायमै राख्नेछ ।..
काठमाडौः नेपालीले टेलिफोनमा कुराकानी गर्न मात्रै वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालीको टेलिफोनमा गर्ने कुराकानी (भ्वाइस) मा भएको यो खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को छ। भ्वाइसमा ठूलो रकम एनसेलका ग्राहकले खर्च गरेका छन् । एनसेलले..
काठमाडौं–पछिल्लो समयमा समाजिक संजाल फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री तथा लिंक ट्याग हुन थालेको भन्दै प्रहरीले त्यसबाट बच्ने उपाय सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सुझाव यस्तो छ। आफ्नो फेसबुक एकाउण्टबाट आफ्नो जानकारी र अनुमती बिना आफूले पठाउदै नपठाएको विभिन्न अश्लिल फोटो तथा भिडियो शेयर हुन थालेपछि प्रहरीले शेयर हुने गरेको..
मेक्सिको: मेक्सिकोमा अधिकारीहरुले कम्प्यूटर कम्पनी डेललाई आफ्नो विज्ञापनमा देखाइए अनुसारको वाचा पुरा गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशपछि डेलले आफ्नो गल्तीले देखाएको एक विज्ञापन अनुसार अब २५०० डलर पर्ने ल्यापटप केबल ३० डलरमा दिनुपर्ने भएको छ। गल्तीले अनलाइनमा प्रकाशित भएको विज्ञापनका कारण विश्वचर्चित डेल कम्पनीले आफ्नो महँगो..
जुकरबर्गलाई एकै दिनमा ३ अर्ब डलर घाटा
काठमाडौं । फेसबुकको सेयर ५.५ प्रतिशतले घट्दा बिहीवार एकै दिनमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई ३ अर्ब डलर नोक्सान परेको छ । सीएनएनका अनुसार यो अहिलेसम्मकै कुनै एक जना लगानीकर्तालाई परेको सबैभन्दा धेरै घाटा हो । कम्पनीका प्रमुख वित्त अधिकृतले लगानीकर्तालाई विज्ञापनबाट हुने आम्दानी निकै घट्नसक्ने चेतावनी दिएपछि फेसबुकको सेयरको..
काठमाडौं, -नेपाल टेलिकमले वाइम्याक्स प्रविधिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने क्रममा कम्पनीले यस अघि नै ७४ वटा जिल्लामा वाइम्याक्स सेवाको पहुँच विस्तार गरिसकेकोमा गत आइतबार देखि हुम्ला जिल्लामा समेत यो सेवाको विस्तार गरेपछि ७५ वटै जिल्लामा वाइम्याक्स..
तपाईंको फेसबुक वालमा जो विज्ञापन देखा पर्दछन् ती देखेर तपाईं कहिलेकाहीँ छक्क पर्नुहुन्छ होला, फेसबुकले कस्तो आफ्नो मनकै कुरा बुझेर आफुसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरु नै देखाइदिएको होला भनेर । तपाईंको परिवारका फेसबुकवाला कसैको जन्मदिन छ भने फेसबुकले तपाइँको वालमा केक वा फूलको विज्ञापन देखाउन थाल्छ । यस्तो सबैको फेसबुकमा हुन्छ र हुनेवाला..
अव फेरिने भयो नम्बर प्लेट, मेसिनले रिड गर्ने सवारी नम्बर आउंदै
काठमाडौं । मेसिनले रिड गर्ने सवारी नम्बर जारी गर्ने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजमार्गमा सवारी ट्राक गर्ने प्रविधि जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रेडियो फ्रिकेन्सी डिभाइसको अनुमति पनि लिइसकेको छ । विभागले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ भनिने डिजिटल प्लेट निर्माणका लागि नयाँ बानेश्वरमा..
फेसबुकमा अब नेपाली भाषामा च्याट गर्न सकिने
एजेन्सी । फेसबुकले नेपाली भाषा प्रेमीहरुको लागि नयाँ योजना लगाएको छ । फेसबुकले एउटा टुल सार्वजनिक गरेको छ जसले नेपाली भाषामा फेसबुक चलाउन सजिलो हुनेछ । फेसबुकले भनेका छ,–‘ अहिले हामी एन्ड्रोइड फोनको लागि फेसबुक एपभित्र देवनागरी एडिटिर प्रस्तुत गर्न लाग्दैछौं ।’ फेसबुकका अनुसार जब एपको सेटिङ अन गरिन्छ तब बारमा देखिएको एक बटनले..
असोज ५ – आफूलाई काम लाग्ने एसएमएस गल्तीले डिलिट भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता गर्न पर्दैन । एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा डिलिट भएको एसएमएस फेरि हेर्न सकिने भएको छ । डिलिट भएको एसएमएस सतप्रतिशत हेर्न सकिने निश्चित नभएपनि त्यसका लागि प्रयास भने गर्न सकिन्छ र प्रायः गरी सफलता पनि मिल्ने गरेको छ । कम्प्युटरमा कुनै फाइल डिलिट भएरमा..
फेसबुकमा यौनजन्य सामाग्री पोस्ट भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरि गर्नुहोस् समाधान:
के तपाईंको फेसबुकमा आफैं अनाबश्यक पोर्न सामाग्रीहरु पोस्ट भईरहेका छन् ? छन् भने अवश्य पनि यसले तपाईंलाई अनाबश्यक तनाव त पक्कै दिएको होला । पछिल्लो समय फेसबुकमा अनाबश्यक यौनजन्य सामाग्री पोस्ट भएर धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु हैरान भईरहेका छन्। फेसबुकलाई अमर्यादित बनाउन सक्रिय भएका ह्याकरहरुले यस्तो गरिरहेका छन् । तर चिन्ता नगर्नुहोस्..